Maninona i Martech dia paikady stratejika amin'ny fitomboan'ny orinasa | Martech Zone
Teknolojia marketing nitombo tao anatin'ny folo taona lasa, mainka fa ny taona maro. Raha mbola tsy nanaiky an'i Martech ianao, ary miasa amin'ny varotra (na varotra, amin'izany) dia tsara kokoa ny miakatra an-tsambo alohan'ny hiverenanao any aoriana! Ny teknolojia ara-barotra vaovao dia nanome ny orinasa fotoana tsara hananganana fampielezan-kevitra mahomby sy azo refesina, manadihady ny angon-drakitra ara-barotra amin'ny fotoana tena izy, ary manamboatra ny varotra azy ireo hitarika fiovam-po, famokarana ary ROI, ary hampihena ny vidiny, ny fotoana ary ny tsy fahaiza-miasa. Izay no horesahintsika bebe kokoa amin'ity lahatsoratra ity - ny fomba hanampian'ny teknolojia ara-barotra ny marika hitombo, na eo aza ny famokarana lanja azo tsapain-tanana.
Agile Marketing dia midika hoe ROI tsara kokoa
Ny ankamaroan'ny departemanta marketing dia mitandrina tsara mandany ny volany amin'ny fanaovana doka satria tsy mieritreritra izy ireo fa afaka milaza marina hoe iza no hahita ireo doka. Mety ho marina izany eo amin'ny tontolon'ny marketing taloha, saingy, amin'izao tontolo ankehitriny izao, ireo fampahalalana rehetra ireo dia eo an-tanan'ny departemanta marketing.
Miaraka amin'ny haitao marketing, mpivarotra, orinasa lehibe na tompona orinasa afaka mijery tsara ny zava-bitan'ny fampielezan-kevitra momba ny dokam-barotra ary manamarina hoe iza no mahita an'io doka io, ary inona no fiantraikany ankehitriny ary mbola hitohizany. Ireo antony ireo dia azo ahitsy araka izay ilaina mba hahazoana ny ankamaroan'ny mpanjifa mamaky ny varavarana.
Raha lazaina amin'ny teny hafa, i Martech dia ahafahana manatsara hatrany ny fivezivezena amin'ny fivezivezena bebe kokoa, mamorona fitarihana bebe kokoa ary mitatitra ny ROI hiverina amin'ny orinasa amin'ny fomba mangarahara. Dan Purvis, Tale ao amin'ny Comms Axis
Ny orinasa dia manana fotoana bebe kokoa hampitomboana sy hampivelatra ny paikadin'izy ireo amin'ny alàlan'ny fanamorana ny data. ROI no isan'ny hetsika marketing natao hanatanterahana azy. Te hivoaka bebe kokoa noho izay apetrakao ianao, ary miaraka amina angon-drakitra marobe handinihana sy hampiasaina hanondroana ny tanjaka sy ny fahalemena, ny tetikadinao dia mety ho marina sy azo tratrarina mihoatra ny hatramin'izay.
Ny varotra dia niditra tao anatin'ny vanim-potoana fiovana tsara, ary tamin'ny alàlan'ny fampivoarana ny teknolojia sy ny fizotrany vaovao no nahafahana nanao izany.
Martech mametraka ny mpanjifanao ho lohalaharana
Ny marketing dia niankina tamin'ny angon-drakitra sy ny fahitana ny mpanjifa hatrany. Saingy, noho ny angon-drakitra misimisy kokoa tonga, ny fomba sy ny fomba fampiasana sy famakafakana an'ity angon-drakitra ity dia nanjary sarotra kokoa.
Ny indostria dia nandalo fiovana be tamin'ny fananana angona be dia be ary tsy tena nahatakatra ny dikan'izany na ny fomba hanampiany azy ireo, afaka manara-maso izany rehetra izany amin'ny fotoana tena izy ary manangona fomba fijery sarobidy sy azo raisina avy aminy.
Araka izany, ny anjara asan'ny mpivarotra (sy ny departemanta marketing) dia nivoatra nihoatra ny famoronana. Nanjary paikady ilaina amin'ny fitomboan'ny orinasa izy amin'ny alàlan'ny fampidirana sosona siansa sy henjana amin'ny famakafakana fanentanana. Tsy misy toerana afenina, fa na aiza na aiza maniry.
Ny fiakaran'ny asan'ny marketing
Ny asan'ny marketing dia nipoitra ho toy ny sehatra mahaliana izay nanangona voka-droa noho ny fiatraikany mivantana amin'ny fahaizan'ny orinasa mitondra ROI azo tsapain-tanana sy azo refesina. Izy io dia mandamina tsy tapaka ny paikadinao sy ny fizotranao, na amin'ny alàlan'ny teknolojia na mifanaraka amin'ireo hetsika ataon'ny orinasa ivelan'ny departemantan'ny marketing. Fandefasana marketing mahomby no lakilen'ny synergisation ny orinasa iray manontolo sy ny fanatratraranao ny tanjona kendrenao.
Ny sombintsombin'ny departemantan'ny departemanta dia matetika no resahina, fa ny silo intra-departemanta dia matetika no tsy raharahina. Ohatra, ao amin'ny departemantan'ny varotrao, mety hisy fisarahana sy fifanolanana hafa. Ny asa ara-barotra isan-karazany dia mety hiasa mitokana ary tsy misy ifandraisany bebe kokoa amin'ny paikady; ny data dia mety ho diso, ampidirina diso noho ny hadisoan'ny olombelona, ​​na tehirizina amina endrika samihafa sy amin'ny toerana samihafa. Tsy fahampian'ny fifandraisana koa mitana andraikitra lehibe amin'ny fitazonana izay tokony ho departemanta mifandray mifangaro.
Androany, ny haino aman-jery dia ampiasain'ny teknolojia. Na dia tsy ekenao ho toy ny teknolojia aza ny orinasanao dia azonao antoka fa manana teknolojia marketing izy io. Na izany ny fampiharana fototra sy malaza indrindra toa ny Google Analytics,Hootsuite na Mailchimp, na rindrambaiko manam-pahaizana manokana momba ny akany.
Ny teknolojia dia mety hampiasaina amin'ny fiantohana ireo fizarazaran-javatra voazarazara ireo. Ny tanjona ao anatin'ny departemantan'ny varotrao dia mety tsy hitovy fa izy ireo dia afaka afovoany, alefa ary ampifanarahana. Orinasa 4,000 mahery izao no manana fampiasam-bola amin'ny haitao marketing, ary indostria mitombo io, izay afaka mandray soa avy amin'ny orinasa rehetra.
Mpandraharaha ara-barotra maro no mihevitra ny tenany ho "mamorona". Ary miaraka amin'ny antony marim-pototra ihany koa, satria singa iray tena ilaina amin'ny anjara asan'izy ireo ary iray izay nanandratra ny marketing mihoatra ny "mahafinaritra ny manana" ankapobeny, mba hisy fiantraikany amin'ny orinasa. Na izany aza, na eo aza izany, tsy nahomby ny fahitana azy ho toy ny paikady stratejika ataon'ny Birao sy C-Suite.
Na izany aza, satria ny teknolojia marani-tsaina sy ny Big Data dia manohy mamolavola ny fomba fananganana fampielezan-kevitra amin'ny marketing, tonga ny fotoana hanaiky ny marketing dia siansa. Voatosiky ny haitao, nefa mbola mampiditra ny fahitana ny famoronana ataon'ny ekipanao, ny marketing dia lasa zavakanto siantifika azo refesina, arahana ary arahi-maso akaiky, hahazoana antoka ny valiny mety indrindra.
80% amin'ny orinasa izao dia manana teknolojia lehiben'ny marketing na mitovy amin'izany amin'ny fanadihadiana 2015-16 Gartner CMO Spend. Izany dia manamarina hatrany fa ny teknolojia ara-barotra eto dia mijanona ary mihoatra ny fanampiana fanampiny ny fifangaroan'ny marketing. Satria mamela ny fivezivezena amin'ny varotra, ny fanatsarana ny efficiencies, ary ny famokarana ROI orinasa azo tsapain-tanana, ny marketing dia azo apetraka ho toy ny fananana paikady stratejika izay manampy mivantana hanafaingana ny fitomboan'ny orinasa.
Miaraka amin'ny fampielezan-kevitra kendrena akaiky dia tokony hohamafisina ny famokarana sy ny varotra mba hanomezana ROI avo kokoa. Izany dia tokony, noho izany, mamela anao hahatratra ny fanantenana rehetra amin'ny tsenanao kendrena, satria manana ny angon-drakitra ianao hahazoana antoka fa fantatrao izay tadiavin'izy ireo.
Tsy vaovao i Martech…
Martech dia tsy foto-kevitra vaovao, na izany aza, ary rehefa ampiarahina amin'ny asa marketing dia afaka mandrindra ny dian'ny mpanjifanao sy manafaingana ny fitomboan'ny orinasanao amin'ny fahatsiarovan-tena amin'ny marika ka mitarika gen sy varotra. Azonao atao ny matoky fa ny mpifaninana amin'ny akany dia manangana ny fivarotana marketing, raha mbola tsy mampiasa azy ireo, noho izany dia mila manao toy izany koa ianao.
Ny fisafidianana tsy hiraharaha ireo tombontsoa mety ho entin'ny teknolojia ara-barotra amin'ny orinasanao dia ny fisafidianana mavitrika ny hametraka ny tenanao ho mahantra amin'ireo mpifaninana aminao. Ny tontolon'ny varotra sy ny varotra maoderina dia niova tamin'ny fomba tena tsara noho ny teknolojia; ny orinasanao dia mila mahazo antoka fa miova koa.
Raha te hahita ny fomba ahafahan'ny Martech manampy amin'ny fampiroboroboana ny orinasanao ianao dia zahao azafady Comms Axis'serivisy - tianay ny resaka tsy misy adidy!
Tags: fitomboan'ny orinasafifandraisanafitomboana-barotrafamakafakana marketingdata momba ny marketinghetsika ara-barotrateknolojia marketingfampiasam-bola amin'ny teknolojia marketingpaikadin'ny teknolojia marketingMartechfampiasam-bola martechpaikady martech